Ady amin’ny tsy fandriampahalemana :: Zandary efatra ambin’ny folo amby zato namoy ny ainy • AoRaha
Ady amin’ny tsy fandriampahalemana Zandary efatra ambin’ny folo amby zato namoy ny ainy
Manamboninahitra, manambonina­hitra lefitra, zandary tsotra samy nahitana fahafatesana avokoa vokatry ny ady amin’ny tsy fandriam­pahalemana. Hatramin’ny taona 2012 dia fantatra fa zandary miisa efatra ambin’ ny folo amby zato no namoy ny ainy. Mihoatra ny zandary iray isam-bolana, araka izany, ny zandary maty voatifitra na voafiran’ny antsy sy voakapan’ ny famakin’ny dahalo. Tamin’ ity taona ity dia zandary miisa efatra no namoy ny ainy hatreto.
“Tany amin’ny faritra atsimon’ny Nosy avokoa ny ankamaroan’ireo zandary namoy ny ainy ireo”, araka ny loharanom-baovao. Milaza ny avy amin’ny Zandarimaria fa: “noho ny fifandonana mahery vaika amin’ireo dahalo sy jiolahy izay sahy mifanandrina amin’ny mpitandro filaminana no naha­faty an’ireo zandary ireo”.
Fantatra ihany koa fa an’ arivony ireo olon-tsotra tompon’omby na fokonolona manara-dia maty novonoin’ ny dahalo hatramin’ny taona 2012.
Nilaza ny jeneraly Rava­lomanana Richard, Sekre­teram-panjakana miadidy ny Zandarimaria fa: “na eo aza ireo fahafatesana zandary an-jatony ireo dia tsy mihemotra ny zandarimaria miaro ny olona sy ny fananany. Voafehin’ ny lalàna ny Zandarimaria manao ny asany. Matoa misy ny dahalo mamoy ny ainy dia misy ny fifandonana sy fifam­pitifirana. Miaro tena araka ny voalazan’ny lalàna ireo
mpitandro filaminana. Mihevitra ny tenany ho mahery tsy laitram- bala ireo dahalo ka izay no ahasahian’izy ireo mifanandrina amin’ny zandary. Lainga ny filazana fa mamono olona ankitsirano ny zandary. Tsy nisy nahita ny tranga tany amin’ireo faritra mena ireo nilaza izany”, hoy izy.
Fiarabe niharan-doza :: Kamiao nitondra mpandeha nahafaty olona efatra
Ala arovan’Ankafobe :: Sombin-tany maitso sisa no navelan’ny doro tanety eny Tamponketsa